पहाडे जनजाति नेताले पद्मरत्‍नलाई ‘मूर्गा’ बनाए : लेखी (अन्तर्वार्ता) – Tharuwan.com
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् थारु समुदायका अगुवा नेता राजकुमार लेखीले पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको जनजाति आन्दोलनलाई ‘२२ दलीय मोर्चाको घटक’ बताएका छन् । तुलाधारको मोर्चाबारे आदिवासी जनजाति नेताहरुवीच विवाद बढेका बेला लेखीले तुलाधारलाई ‘मूर्गा’को संज्ञा दिएका छन् ।
लेखीले जनजाति महासंघका केही पूर्वअध्यक्ष र महासचिवहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पद्मरत्नलाई ‘मूर्गा’ बनाएर जनजाति आन्दोलनलाई नै विभाजित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले जनजाति आन्दोलन आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा मात्र हुनुपर्ने भन्दै पद्मरत्न आन्दोलनमा महासंघ र तराईका आदिवासी जनजाति सहभागी नहुने ठोकुवासमेत गरेका छन् ।
लेखीसँग गरेको कुराकानी :
आदिवासी जनजाति महासंघलाई पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको जनजातिहरुको राष्ट्रिय आन्दोलनमा समावेश हुन नदिन तपाई सक्रिय हुनुभयो रे, किन हो ?
पहिलो कुरा त जनजाति महासंघबाहेक अरु व्यक्तिले गर्ने आन्दोलन जनजातिहरुको राष्ट्रिय आन्दोलन हुन सक्दैन । मलाई आरोप लगाउनेहरुले जे भने पनि डराउँदिन । हिजो २५ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति महासंघ जनजाति अधिकारका निम्ति लड्दै आएको संगठन हो भन्ने जगजाहेर छ ।
यही संस्थामा शुरेश आले, परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, ओम गुरुङ, बालकृष्ण माबुहाङहरुले नेतृत्व गरुञ्जेल महासंघमात्र ठीक हो भन्ने अनि अहिले उनीहरु निवर्तमान वा भूतपूर्व भएपछि यसलाई मान्दैनौं भन्ने सम्भ्रान्त चिन्तनको मैले बिरोध गरेको हुँ ।
अहिले कुनै संगठनको प्रमुख वा पदमा नरहेपछि २५ वर्षको इतिहास बोकेको महासंघ विरुद्ध गल्ली गल्ली टोलटोलमा समिति बनाएर हिँड्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
पद्मरत्न तुलाधर जस्तो बरिष्ठ नेताको अध्यक्षताको समितिलाई कसरी गल्लीको संस्था भन्न मिल्छ ?
पद्रमत्न तुलाधर को हो ? उहाँ नेवारको अध्यक्षको हैसियतमा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ? केही चार/पाँचजना जनजाति नेताहरुको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न महासंघलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । राजकुमार लेखी उनीहरुको दास होइन, कमैया होइन । पद्मरत्नलाई मूर्गा बनाएर कुनै आन्दोलनको घोषणा गरिन्छ भने थारु समुदाय, थारु कल्याणकारी सभा र तराईका आदिवासी जनजातिहरु उनीहरुको पछि लाग्दैनन् । संस्थागत रुपमा जानका निम्ति महासंघ छ ।
अधिकारको कुरा गर्न संस्थागत रुपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसमा महासंघले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । व्यक्तिलाई प्रमुख मानेर जनजाति महासंघ उनीहरुको पिछलग्गु भएर जानुहुँदैन र जाँदैन ।
यो राष्ट्रिय आन्दोलनको एउटा घटक महासंघ पनि त हो नि ?
गल्ली र टोलमा गठन हुने व्यक्तिगत समितिहरुमा महासंघ घटक हुन सक्दैन र थारु कल्याणकारी सभा त्यसमा जाँदैन । महासंघले सबै ५९ जातीय घटकहरुको नेतृत्व गरेर आन्दोलन वा अन्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
महासंघ २२ दलीय मोर्चा र त्यसलाई सघाउन गठन भएका पद्मरत्नहरुको मोर्चामा जानै सक्दैन र जानुहुँदैन । अर्को कुरा, जुन आन्दोलनमा थारु समुदायका कुनै एजेण्डा, हक अधिकारको माग समटेएकिो छैन भने उनीहरुको मोर्चामा हामी त जानै सक्दैनौं । गाईघाटमा बसेको थारुको बैठकले प्रष्टरुपमा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ । जनजाति महासंघले पनि त्यही भनिसकेको छ ।
आन्दोलन घोषणा गरिएको कुरा आयो नि ?
यो सामन्ती चिन्तन बोकेका, राजावादी पञ्चायती मानसिकता भएकाहरुले बेला-बेलामा प्रकट गरेको कुरा हो । हामी धेरै जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका नेता हौं, हामी नै राजा महाराजा हौं भन्ने चिन्तन पाँच/सातजना पहाडे आदिवासी जनजाति नेताहरुमा हावी रहेको छ । हामी नै अल्पसंख्यक जनजातिहरुको ठेकेदार हौं भन्नेहरुका विरुद्ध लड्दै आएको मान्छे हुँ म । त्यसैले केही पाँच/सातजना पूर्वअध्यक्ष वा महासचिवहरुको संभ्रान्त सोचसँग हामी सहमत छैनौं ।
लामो समयसम्म जनजाति महासंघलाई छ/सातवटा धेरै जनसंख्या भएका राई, मगर, गुरुङ, तामाङ,लिम्बुहरुले तार बारेर बसेका थिए । उनीहरुको ठेकेदारी खोसिन लाग्यो भनेर अहिले विक्षिप्त भएर टोल-टोल र गल्ली-गल्लीमा मोर्चा बनाउँदै हिँडेका छन् । त्यसमा आदिवासी जनजातिहरु पछि लाग्नुहुँदैन ।
अहिलेको पद्मरत्न नेतृत्वको समिति गठनमा महासंघको भूमिका के हो त ?
महासंघको कुनै भूमिका छैन । हामी कसैसँग सल्लाह छलफल भएको छैन । तराईका आदिवासी जनजाति र पहाडका पनि अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा समेटिएका छैनन् । कुनै पदमा नभएका स्वार्थी र महत्वकांक्षी व्यक्तिहरुले आन्दोलनमा हावी हुन र जनजाति आन्दोलनलाई विभाजित गर्न पद्मरत्न तुलाधरलाई मोहरा बनाएका हुन् । जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व जनजाति महासंघले मात्र गर्न सक्छ । आङकाजी शेर्पा जस्ता मान्छेहरुले चाहेर मात्र हुँदैन । म महासंघको निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा जनजाति महासंघलाई बलियो बनाउन जुनसुकै योगदान गर्न तयार छु ।
महासंघलाई बाइपास गरियो भन्नेमा मात्रै तपाईको आपत्ति हो कि पद्मरत्न समितिको मुद्दा र एजेण्डामै विमति हो ?
पद्मरत्न समितिले अघि सारेका मुद्दामै हाम्रो विमति छ । पहिलो कुरा त उहाँहरु केही मुठ्ठीभर पाँच/सातजना पहाडे जनजाति नेताहरुले विगत आठ/दश वर्षदेखि जातीय राज्य माग्दै आउनुभएको छ । मैले महासंघको अध्यक्ष भएकै बेला प्रष्ट भनें, हामी जातीय राज्य माग्दैनौं ।
हामी संघीय समावेशी राज्य माग्छौं । संघीय समावेशी राज्य र जातीय राज्यमा आकाश जमिनको फरक छ । जातीय राज्य मागेर अशान्ति मच्चाउने, जनजाति आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ ।
दोस्रो कुरा प्रचण्ड नेतृत्वको कुनै पनि मोर्चालाई हाम्रो सहमति र समर्थन हुँदैन । प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेला, प्रचण्डको पार्टी तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकै बेला तराई थरुहटलाई जबजरस्ती मधेशमा थोपर्ने उनीहरु नै हुन् ।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाको गोटी बन्न हामी कसरी जान्छौं । जनजाति महासंघ कुनै दलको विरुद्ध वा समर्थनमा जान सक्दैन । थारुलाई जबर्जस्ती मधेसी बनाउने निर्णयको पहाडका पाँच/सातजना मठाधीश जनजाति नेताहरुले विरोध गरेका छैनन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ उनीहरुको नियत ।
रुक्मिनी र इन्द्रजीत थाकसको केन्द्रीय सल्लाहकारमा नियुक्त, केन्द्रीय परिषद् बैठक बोलाइयो
3 thoughts on “पहाडे जनजाति नेताले पद्मरत्‍नलाई ‘मूर्गा’ बनाए : लेखी (अन्तर्वार्ता)”
गाईघाटमा बसेको थारुको बैठकले प्रष्टरुपमा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
Lekhi g Kunai dal le Tharu Addibasi janjati, madhesi, dalit, muslim ko hak adhikar ko Ajenda clear rupma uthayo bhane uslae samarthan garne wa nagarne? dal sastha bekti le kasto mudda uthae rachha tesma bhar parchha, yadi Raj kumar lekhi niswartha rupma issue uthayo bane jo kohi samarthan garchha yadi aphno nichit swartho ko lagi uthayo bhane tharu jantale chhordaenan, amalae lagchha Padma ratna tuladhar le jun issue uthaunu bhachha tyo yakdamae swikaryogya chha, tapae haru jasta maha sang ka padadhikari haru teem ma chhal phal garera sahayog garda uchhit hola, yo kunae bekti ko ladae hoena adhikar aatma samman pahichaan ko ladae ho,
मैले महासंघको अध्यक्ष भएकै बेला प्रष्ट भनें, हामी जातीय राज्य माग्दैनौं ।
tapae le bhnnu bhayako Jatiya rajya ra sanghiya rajya kasari bujhauna khojnu bhayako ho? jatiya rajya bhaneko tharuhat, limbuwan, khambuwan, magarat, tamsaling, newa, lae bhanu bhayo ko ho ki, yo ho bhane tapae cangress ra yamale ko puchhar bhayara bholeko dekhinchha, jatiya rajya bhane ko ta tharu pradesh, newar pradesh, magar pradesh, limbu pradesh mangyo bhane tyo jatiya hunchha
संघीय समावेशी राज्य ko kura pani garnu bhako chha k ho sanghiya samabesi rajya? tehi yamale ra cangress le lyaako7pradesh ko kura ta garnu bhako hoena? tapae ko view baata uttar dachhin pradesh banauda pani hune bhanne aasaya dekhiyo, tesari sanghiya rajjya banauda tharu lagayat madhesi janjati harulae k phaeda hunchha ?2wota phaeda mattra batae dinus .
प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेला, प्रचण्डको पार्टी तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकै बेला तराई थरुहटलाई जबजरस्ती मधेशमा थोपर्ने उनीहरु नै हुन् ।
yo kura chahi ma samarthan garchhu tharu hijo pani tarai ka aadibasi bhumiputtra thiya, aaj pani hun ra bholi pani rahane chhan, yadi kasaile galti garyo bhane u sudhrina chahanchha bhane sudhrine mauka pani dinu parchha,
यो पत्र नागरिक पार्टी अध्यक्ष लेखिजीलाई !
लेखीजी,एक्लै एक्लै आन्दोलन गर्छु भन्नु कसरी सम्भव देख्नु भो?तपाई जात को कुरा आफै गर्दै यो पहाडी यो मधेसी भन्दै यो वा त्यो आरोप लाउदै हुनुहुन्छ , तपाई पनि त् थारुको मात्र कुरा उठान गर्दै हुनुहुदैछ , अनि अरुलाई कसरी जातिबादको संज्ञा दिदैहुन्छ?पार्टीको कुरा गर्दा तपाई पनि नागरिक पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ , तपाई अरु पार्टी,दल , समिति संग सहकार्य न गर्ने नि तपाईहरुसंग अरुले सहकार्य गर्नुपर्ने?यो कसरि संभब हुन्छ?तपाईलाई thaha हुनुपर्ने “घर फुटे गवार लुटे “तेसैले मेरो हार्दिक अनुरोध छ तपाईहरुलाई तपाईहरु यो , उ त्यो भनेर हैन एक भएर ब्राह्मणबाद बिरुद्ध लड्नु होस् अनि मात्र तपाईहरुको माग पुरा हुनसक्छ , नत्र मैले सम्भब देखिना , अझ थारुको अधिकार प्राप्ति अनिश्चित छ ।
राजाकुमार लेखी को अन्तर्वाता पढे, उहाले दिएको बेतूक को तर्क केवल मेडियावाजी गर्दै लोकप्रियता को लागी मात्रै हो । उहाकै भनाइमा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ बिना राष्ट्रिय आन्दोलन उठनै नसक्ने ठोकुवा गर्ने लेखीले महसंघको धेरै बचाउ गर्नु पर्दैन, सबै नेपाली जनताहरुले देखी सकेका छन, भुझी सकेका छन । हिजका दिनमा संबिधान सभाको २६ सीटमा मनोनित भाईन्छ की भनेर महसंघका अध्यक्ष को नेत्रीत्वोमा संबिधानसभा अगाडि दुई तीन सयको भेला गर्दै आन्दोलन गरेको देखेनौ र ? पहिचान विरोधी नेताहरुको घर घर, कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने नाममा चाहरेको देखेनौ र ? महसंघका महासचिव पेम्बा भोटे संबिधान सभामा पुग्ने बितिकै कसरी बोली परिवर्तन भयो लेखी जि ले हेक्का राख्नु भाछ ? जनजाती ककस बन्न बिरोध गर्ने उनीलाई कस्ले त्याहा पुर्यायो ? यस सम्बन्धमा यहाँको ध्यान पुगेको छ ? यसर्थ लेखी जी अरुको धेरै खेदो खन्न छाड्नुस, यसरी तपाईं हमी सबैको हित गर्दैन, सबैजना मिलेर गए सबैको भलो हुन छ । मलाई लाग्दैन महसंघको कसैले बिरोध गरेको छ, न गर्न सक्छन यो सब तपाईंको बनावटी कुरा मात्रै हो । छलफललमा बोलाइएको छैन भने सोद्धा हुन्छ नागेन्द्र कुमाल, पेम्बा भोटे र डन्डु ढोक्प्या शेर्पा लाई ? लोकतन्त्रमा सबैलाई अधिकार छ संगठन बनाउने ? ठेकान बिनाको बहु प्रदेशको नाममा थरुहटवासिलाई दिग्भ्रमित नगरनुस ? आदिवासी थारु समुदाय थारु कल्यान्कारीणिसभालाई सोध्दै छन टाउकोले पुच्छर हल्लाउछ की ? पुच्छरले टाउको ?